Ireo mpizahatany mieritreritra ny fitsidihana any India dia matetika mametraka fanontaniana raha nofoanana ny vina na tsia. Satria misy tsaho mifanohitra izay manakorontana ny fomba handraisana ny fahazoan-dàlana hiditra ity firenena ity.
Raha ny marina dia tsy misy sarotra. Na ahoana na ahoana, raha te ho any India dia mila visa. Ary ny fizotran'ny endriny dia manana ny toetrany manokana.
Ahoana ny fomba hahazoana visa any India?
Ny zavatra voalohany tokony hanapahanao hevitra dia ny hiatrika ity olana ity (ary hamafiso be loatra) na hanome ny zava-drehetra amin'ny masoivohon'ny fiaramanidina.
Ny visa, ny masoivoho na orinasa miaraka amin'ny fankatoavana mifanaraka amin'izany dia afaka mangataka fahazoan-dàlana mankany India. Voalohany dia mila manangona tahiry antontan-taratasy ianao.
Dokam-barotra amin'ny visa ho an'i India :
fanandramana vahiny sy dika amin'ny pejy misy sary;
pasipain'ny olom-pirenena Rosiana iray ary kopian'ny pejy misy sary sy fahazoan-dàlana;
ny fanontaniana misy;
sary iray mirefy 3.5 cm x 4.5 cm;
fanamafisana amin'ny famandrihana hotely na taratasy avy amin'ny antoko mpanasa miaraka amin'ny antsipirian'ny pasipaoro.
Rehefa mitety ankizy miaraka amin'ny antontan-taratasy ianao, dia mila ampiana hoe:
ny taratasy fangatahana zaza vao teraka sy ny kopia iray;
Raha toa ka mandeha iray monja ny ray aman-dreninao dia tsy maintsy mametraka ny fanekena an-tsoratra amin'ny iray hafa ianao amin'ny fanesorana ilay zaza avy any amin'ny firenena.
Ilaina ny mandinika ny fepetra ilaina amin'ny famolavolana ny antontan-taratasy:
Ny pasipaoro vahiny dia tsy maintsy manan-kery mandritra ny 6 volana raha kely indrindra ary manana pejy malalaka farafahakeliny;
Tsy mora ny mameno ny fanontaniana misy anao. Izy io dia ampy tsara ary feno afa-tsy amin'ny teny Anglisy amin'ny dika roa, noho izany dia mendrika ny haka ohatra ao amin'ny departemanta consulaire na vice-maso izy mba tsy handefa fahadisoana, na hampiasa ny tolotra karama amin'ny sampan-draharahan'ny mpizaha tany na ny sampana fandikan-teny;
Ny sary dia tokony ho miloko, matematika, tsy misy sisin-tany sy zoro amin'ny habe mety.
Ny faharetan'ny fanarenana visa an'i India dia dimy andro fiasana.
Firy ny visa ho an'i India ho an'ny Rosiana?
Ho fanoratana ny visa fizahan-tany mahazatra dia ilaina ny mandoa 1600 roubles ary 135 roubles ho an'ny serivisy. Raha mitaky ny vokatra aloha ny daty fialantsasatra, afaka manokatra visa maika maika any Inde ianao ary avy eo dia indray andro sisa no hamitana izany, fa ny vidiny dia hitombo avo efatra heny.
Firy izao ny visa any India?
Miankina amin'izay ilainao manokana izany. Misy ny fahazoan-dàlana tokana, indroa na maromaro, miankina amin'ny isa imbetsaka mandritra ny vanim-potoanan'ny visa misokatra iray dia mila mandao ny firenena sy miverina ny mpandeha. Amin'ny ankapobeny, misy visa tokana misokatra mandritra ny 1-3 volana, fidirana indroa sy maromaro - mandritra ny 90-180 andro. Ary tokony ho fantatra fa tsy ho vita mihitsy ny hanitatra visa raha tsy miala an'i India.
Zava-dehibe ny hahatakatra fa ny antontan-taratasy fanomezan-dàlana avy amin'ny masoivoho dia manankery nanomboka tamin'ny fotoana namoahana azy. Noho izany, tsara kokoa ny manokatra azy io alohan'ny hiaingany.
Misy ny fiheverana fa mora kokoa ny mahazo visa rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina any India. Na izany na tsy izany, azo atao ny mahazo ny endrika mety. Ary, ao amin'ny fanjakan'i Goa ihany. Ary tsy ho toy ny mahazatra izany, fa fahazoan-dalana vonjimaika hijanona ao amin'ny firenena mandritra ny 15 andro.
Ny fepetra takiana amin'ny visa toy izany ho an'i India dia ny fisoratana anarana amin'ny alalan'ny orinasam-pizahantany ho an'ny vondron'olona tsy latsaky ny 4. Ary izany, mazava ho azy, dia mila atao mialoha. Amin'ny fombafomba dia alefa ny pasipaoro, fa mamoaka dokam-barotra manokana manamarina ny fijanonana ara-dalàna eto amin'ity firenena ity. Ny pasipaoro aoriana dia haverina ho takalon'io endrika io rehefa miverina any an-trano.
Mba hahatonga ny fitsangatsanganana fotsiny dia mitondra fahatsapana tsara, dia tena zava-dehibe ny mandray tsara ny fisoratana anarana ny antontan-taratasy rehetra. Ny fahazoan-dàlana mankany India dia tsy sarotra loatra, ilaina fotsiny ny mahatakatra ny fepetra takiana ho an'ny antontan-taratasy ary manitsy ny fotoana.
Trano fandraisam-peo tsara indrindra ao Crimea miaraka amin'ny torapasika manokana
Copenhagen - toetrandro
Tretyakov Gallery - sary hosodoko
Fiara misy seza voatokana
Nosy tropikaly, Berlin
Mila visa ho an'i Tonizia ve aho?
Inona no horaisinao miaraka amin'ny fiaramanidina?
Inona no ho lamaody amin'ny fararano 2015?
Disney sarimihetsika ho an'ny tanora
Hemangioma amin'ny aty - fitsaboana
Ahoana no hanamboarana varimbazaha?
Ny tea avy amin'ny karazana St. John dia tsara sy ratsy
Vehivavy tarika Taratasy
Tablette fanasina vehivavy